China No Alcohol Plant Antibacterial Wipes ထုတ်လုပ်သူနှင့် ရောင်းချသူများ | Dr.Hwelmay
Alcohol Plant Antibacterial Wipes မရှိပါ။
သင်ထောက်ကူပစ္စည်းများ: ရေသန့်၊ Spunlace ယက်မဟုတ်သော၊ Benzethonium chloride၊ Honeysuckle ထုတ်ယူမှု။
1.Bacterostatic နှုန်းသည် 99.9% ဖြစ်သည်၊ ၎င်းသည် Staphylococcus aureus နှင့် Escherichia coli တို့ကို ဆန့်ကျင်ဘက်တီးရီးယား သက်ရောက်မှုရှိသည်။
2. နေ့စဉ် အရေပြား သန့်ရှင်းရေး အတွက် သင့်လျော်ပါသည်။ မျက်လုံး၊ ဒဏ်ရာများနှင့် ထိလွယ်ရှလွယ်အနေအထားတွင် အသုံးပြုခြင်းကို ရှောင်ကြဉ်ပါ။
အယ်လ်ကိုဟောစက်ရုံမှ ပဋိဇီဝဆေးများ မပါရှိပါ။
သင်ထောက်ကူပစ္စည်းများ: ရေသန့်၊ Spunlace ယက်မဟုတ်သော၊ Benzethonium chloride၊ Honeysuckle ထုတ်ယူမှု
3. ထုတ်ကုန်သည် အယ်လ်ကိုဟော သို့မဟုတ် ချောင်းဆိုးဆေးမပါဘဲ သန့်စင်ပြီး နူးညံ့သည်။
1.MINI နှင့် ခရီးဆောင်၊ သန့်ရှင်းပြီး စိတ်ပူစရာမလိုပါ။
2.Conventional wet wipes များသည် လေးလံပြီး သယ်ရခက်ခဲသည်။
3. ၎င်းကိုအိတ်နှင့်ဝင်ပေါက်အိတ်ထဲသို့ထည့်ပါ၊ သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူသောထုပ်ပိုးမှု ၈ ခု၊ အပြင်ထွက်ရန်လွယ်ကူသည်
ကျန်းမာပြီး သက်တောင့်သက်သာရှိသော၊ ဆိတ်ငြိမ်သောအသားအရေကို ခံစားပါ။ သင့်အား သန့်ရှင်းစေပါ။ သင် ကြီးပြင်းလာချိန်တိုင်း၊ လက်သည် အဝတ်ကဲ့သို့ ခံစားရသည်၊ ကောင်းသော စိုစွတ်သော သုတ်များကို ကောင်းသော အထည်များအဖြစ် ရွေးချယ်သည်။ ဆက်တိုက်မဟုတ်သောစာရွက်ဒီဇိုင်း၊ ထုတ်ယူရန်လွယ်ကူသည်။ စဉ်ဆက်မပြတ် စာရွက်နည်းပညာ၊ ထုတ်ယူရန် အတားအဆီးမရှိ၊ မလိုအပ်သော စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကို လျှော့ချခြင်း၊ အိမ်အတွက် မရှိမဖြစ် မြင်ကွင်းပေါင်းစုံကို အသုံးပြုခြင်း။
1. စိုစွတ်သောခံစားမှု၊ လုံလောက်သောအစိုဓာတ်၊ ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်နှင့် တာရှည်ခံမှု
2.Spunlace မဟုတ်သော-ယက်လုပ်ခြင်းကို လိုက်လျောညီထွေရှိပြီး တာရှည်ခံသည့် ဖိအားမြင့် မိုက်ခရိုစီးဆင်းမှုနည်းပညာဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည်။
1.အပျော့စား ဘက်တီးရီးယားပိုးသတ်ဆေး၊ ဘက်တီးရီးယား ပိုးသတ်နှုန်း 99.9% အထိ ရှိသည်။
2. Staphylococcus aureus နှင့် Escherichia coli အပေါ် ဆန့်ကျင်ဘက်တီးရီးယား သက်ရောက်မှု
1. ထိရောက်သော ဘက်တီးရီးယား ပါဝင်ပစ္စည်းများ၊ PHMB ထည့်ပါ။
2. ထိရောက်မှုနည်းသော အာရုံစူးစိုက်မှု ၊ လျင်မြန်သော လုပ်ဆောင်မှု အရှိန်ကြောင့် အကောင်းဆုံး မှိုသတ်ဆေးဟု ဆိုနိုင်ပါသည်။
1. ဘက်တီးရီးယားတွေကို သေစေနိုင်တဲ့ ဘက်တီးရီးယားတွေကို သုတ်ပေးပါ။
2. အပျော့စား ဖော်မြူလာ၊ ဘက်တီးရီးယားပိုးမွှားများနှင့် ယားယံခြင်းမရှိ
3. သေနှုန်း 99.9% ထိရောက်ပြီး အရေပြားယားယံမှု စမ်းသပ်မှုကို အောင်မြင်ပြီးပါပြီ။
1. ဘေးကင်းပြီး ဘက်တီးရီးယားပိုးမွှားကင်းစင်သော မိခင်များနှင့် ကလေးများအတွက် စိတ်ချယုံကြည်နိုင်ပါသည်။
2. ချောင်းဆိုးဆေးမရှိ၊ အရက်မသောက်၊ အဖြူရောင်အပင်ကို တားဆီးပေးသည့် ဘက်တီးရီးယား အစိတ်အပိုင်းများသည် ကောင်းမွန်သောပိုးသတ်ခြင်းအကျိုးသက်ရောက်မှု၊ ရေရှည်ဆန့်ကျင်ဘက်တီးရီးယားနှင့် အရေပြားကို လှုံ့ဆော်ပေးနိုင်သည်၊ လိင်စမ်းသပ်မှု၊ PH အားနည်းအက်ဆစ်ကို ယုံကြည်စိတ်ချစွာ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
ပိုးသတ်ဆေး၊ ဘေးကင်းပြီး ယားယံခြင်းမရှိပါ။
အယ်လ်ကိုဟော၊ ချောင်းဆိုးဆေး၊ တောက်ပစေသော ဓာတုပစ္စည်းနှင့် အခြားဓာတုပစ္စည်းများ မပါဝင်ပါ။
သေးငယ်သော ကလေး ပိုးသတ်ဆေးနှင့် ဘက်တီးရီးယား ပိုးသတ်ဆေးများ